तपाईं locust बारेमा गीत सम्झना गर्छन्? उनको सुगन्धित bunches बारेमा गीत? शायद बोट को कुनै पनि Acacia जस्ता को ब्याज evoke छैन। यो एक बाक्लो ट्रंक संग, एक उच्च छ र बेल रूख एक फैलाउने मुकुट पहिलो नजर मा जस्तो देखिन्छ र कुनै पनि चासो कारण छैन। गहिरो चर्किएको संग चाँदी-खैरो छाल, unpaired pinnately मिश्रित पात, र spikes शुट ...
तर सबै कुरा गर्दा बिरूवा blooms परिवर्तन। जताततै छरिएका यो महिना टुकडे - यो पौराणिक कथा Acacia फूल अनुसार। उनको सेतो सुगन्धित फूल drooping panicles मा संकलित छन् र vaguely स्वर्गबाट उडान moths सदृश। र विशेष गरी राम्रो छ के, कालो locust छैन आँखा मात्र खुसी छ र रोमान्टिक मुड सिर्जना, तर पनि, हामीलाई निको पार्नुहुन्छ हाम्रो छाला को हेरविचार लाग्छ।
युरोप मा, "खुशबूदार दबाइ" को पहिलो बिरुवा को XVII शताब्दीमा ल्याए। शाही माली रबिन थर संयुक्त राज्य अमेरिका तिनीहरूलाई ल्याए, र यो मानिसको सम्मान पनि Acacia र रबिन भनिन्छ। यो बोट को जीवन 50 वर्षभन्दा रहन्छ। यो पार्क, उद्यान, दक्षिणी बोट रूपमा boulevards मा बढ्छ, तर बिस्तारै, नयाँ क्षेत्र सिक्दै 200 भन्दा बढी वर्ष, हामीलाई आउँछन्। locust फूल लेट मे मा सुरु र फल जुन मा पकाना।
Acacia एक औषधीय बिरुवा रूपमा लोक चिकित्सा मा ज्ञात। निको पार्ने उनको फल को रासायनिक संरचना राम्ररी अध्ययन भएको छैन हुनत गरिएको, फूल, छाल, पात र फल हो। यो स्थापित भएको थियो कि छाल र फूल वर्तमान robinin मा (flavonoid) - यूरिया जीव को excretion फैलाउने एक पदार्थ। तर यो विषाक्त छ, र Acacia आत्म-व्यवहार रोग प्रयोग खतरनाक हुन्छ।
Acacia देखि बाली औषधीय कच्चा माल विशेष नियमहरू नियालेर, आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, फूल आधा खुला छ, यो फूल चरणमा संकलित छन् र राम्रो तरिकाले पर्ज वातावरण मा एक उच्च तापमान मा सुकेको छ। यी सुगन्धित फूल भिटामिन, आवश्यक तेल, खनिज र जैविक एसिड समावेश गर्दछ।
छाल र पात बढ्दो चरण समयमा सङ्कलनमा। pectins, टेन्निसको, फैटी तेल - संयंत्र को पात flavonoids र आफ्नो glycosides र जवान छाल मा पाइन्छन्।
तयारी आधारित antipyretic, expectorant, choleretic, antispasmodic, hypotensive र सजिलो रेचक औषधि रूपमा नियुक्त कच्चा Acacia।
Acacia, वा बरु, यसको फूल, विभिन्न जठरांत्रिय रोगहरु, gastritis र अल्सर, को थैली, मृगौला र जब urolithiasis, radiculitis, rheumatism, osteochondrosis, सर्दी र अन्य रोगबाट को रोगहरु को उपचार गर्न लागू गरियो।
धोए घाउ फूल tincture वोदका वा रक्सी शोरबा फूल संकुचन र संयुक्त रोग संग घर्षण गर्न प्रयोग गरिन्छ। तर यहाँ Acacia भित्र मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ डाक्टर को प्रत्यक्ष निर्देशनमा अन्यथा यो गंभीर विषाक्तता वा अधिमात्रा सक्छ।
Locust uterine myoma र महिला यौन अङ्गहरूको भडकाऊ रोगहरु संग एक decoction रूपमा लिएको, तर बाँझोपन यसका फूल को जलसेक पिउन। चिसो र खोकी मज्जा गर्न पात को एक decoction, भूमि लिन।
एक खाना र रूपमा अनुहार मास्क एउटा पूरक रूपमा प्रयोग भएको छ जो Acacia देखि धेरै उपयोगी मह। फल, तरकारी, अन्डा वा पनीर देखि मास्क यो मह केही थप्न भने, तिनीहरूले एक कायाकल्प प्रभाव, छ गर्नेछ झुर्रियाँ बाहिर चिकना र प्राप्त तेल छाला को छुटकारा। मात्र कुरा के तपाईं जान्नु आवश्यक: तपाईं एक मास्क लागू गर्नु अघि, एलर्जी प्रतिक्रिया कि हेर्न जाँच गर्नुहोस्। को कुहिनो को Crook यो परिणामस्वरूप मिश्रण गर्न एक सानो धब्बा।
यो Acacia देखि औषधीय कच्चा माल कम अम्लता, एलर्जी संग मानिसहरूले प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। र, पाठ्यक्रम, decoctions र infusions को तयारी मा हुन धेरै कडाई गर्ने नुस्खा पालन गर्नुपर्छ। हरेक अवैतनिक लागि लागूपदार्थ र बिष नेतृत्व गर्न सक्दैन।
समय को दाखको बोट को जब गिरावट संग पहिचान?
उपकरण टमाटर खेती: दायाँ र गलत?
बगैचा स्ट्रबेरी "Wim-चौडाइ": समीक्षा, सुविधा र खेती
बिर्सेका र अज्ञात Nasturtium: खेती र मर्मतका
वसन्त मा शंकुधारी रूखहरू रोपण: सिफारिसहरू
राम्रो azalea (फूल)। कसरी बिरुवाहरु हेरचाह गर्न
केप Idokopas र Gelendzhik मा पुटिन गरेको निवास
अधिक म बस््छु, म धेरै बोल्छु: डन्कुमा समात्ने क्याटफिश
हानि कारण बिना समुद्र मा sunbathe कसरी सही
एक गाई को थन मा warts लागि को कारण र उपचार
विरामीहरु को व्यावसायिक परिवहन
कसलाई तंग स्कर्ट लगाउने? महिलाहरु को लागि फैशनेबल कपडे
Crochet पट्टियां crochet को आधार - योजना